Ukuhanjiswa kokutya -Shanghai Huizhou Industrial Co., Ltd.
Kwishishini lezothutho elibandayo, malunga neepesenti ezingama-90 zeemveliso zinxulumene nokutya Kwaye iinkonzo ze-e-yorhwebo ziyaqhubeka nokwazisa kunye nokwandisa, iimpahla ezininzi ziyahanjiswa okanye zithunyelwe phantsi kwepakethi ebandayo elawulwa kukushisa ukuze kuqinisekiswe iimveliso ezinobushushu ukufika ngokukhuselekileyo. Ngokwesiqhelo ukupakishwa okulawulwa bubushushu zii-aluminium foil liner, ibhegi eshushu okanye ibhokisi epholileyo kunye neepakethe zomkhenkce wejeli ngaphakathi.
Ukutya okutsha okuhambisa ukutya okubandayo, sinikezela ngezisombululo kubathengi bethu abenza ishishini kwiNyama, iziqhamo kunye nemifuno, ukutya kwaselwandle, ukutya okunefriji, ukubhaka, ubisi, ukutya okulungeleyo, itshokholethi, ice cream, ukutya okutsha okuku-intanethi, ukuveza kunye nokuzisa, indawo yokugcina izinto kunye nokuhanjiswa kwempahla.
Ukutya okutsha okubandayo kwityathanga lokutya, iimveliso zokupakisha ezilawulwa bubushushu esizinike zona ziipakethe ye-gel, ipakethi yenaliti yamanzi, i-hydrate eyomileyo ipakethi, isitena somkhenkce, umkhenkce owomileyo, ibhegi yefoyile yealuminium, ibhegi eshushu, iibhokisi ezipholileyo, ibhokisi yokufaka ibhokisi, Iibhokisi ze-EPS.
Isisombululo sokutya siqinisekisiwe
Isiphelo: Esi sisombululo sinokugcina i-cherry intsha ukuya kwiiyure ezingama-24 ngokulinganisa ukuthunyelwa kwecherry duirng Intwasahlobo kunye namaxesha ekwindla.
Isiphelo: Esi sisombululo sinokugcina i-steak efrijini phantsi kobushushu be-1 ℃ okanye ngaphantsi ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-20 ngokulinganisa ukuthunyelwa kwesiteki sentsimbi duirng Intwasahlobo kunye namaxesha ekwindla.
Isiphelo: Esi sisombululo sinokugcina i-ayisikhrim phantsi kobushushu be-5 ℃ okanye ngaphantsi ukuya kwiiyure ezingama-21 ngokulinganisa ukuhanjiswa kwe-ice cream duirng Intwasahlobo kunye namaxesha ekwindla.